Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -emegharị na Thailand » Site na Super Fun Hot Spot ruo Mgbidi Nchebe
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Crime • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Akụkọ na -emegharị na Thailand • Tourism • Mmelite nke Njem njem
Walking Street na Pattaya - site n'ikike nke Pattaya Mail
Ọnọdụ dị egwu na nke efu na okporo ụzọ ama ama na Pattaya na-akwụsị naanị site na ụlọ ahịa atọ ka na-emepe emepe: otu ụlọ ahịa dị mma Family Mart na obere ụlọ ahịa ọgwụ nke na-egosi na ọ na-elekọta mmadụ ole na ole bi na saịtị ahụ, yana ụlọ ahịa akwa Japan na-eche. nwee ndidi ka oge dị mma tụgharịa.
N'ọnwa gara aga, ọkụ gbara ụlọ oriri na nkwari abalị Nashaa wee zoo ya ugbu a n'azụ mgbidi nchekwa igwe dị oke elu.
Maka nchekwa, ọtụtụ ụlọ ndị ọzọ dị na mpaghara ahụ ka ejiri otu mpempe akwụkwọ kpuchie na Walking Street a ma ama.
Ndị ọrụ nchekwa amụbaala ugboro atọ kemgbe ihe a mere n'agbanyeghị na onweghị ndị ahịa ụbọchị ndị a.
The onye ọkụ gbara n'ọnwa gara aga, Nashaa ụlọ oriri na nkwari abalị na Pattaya, Thailand. Mgbanwe dị egwu nke Walking Street esiwo n'ọmarịcha ọmarịcha gaa n'obodo mmụọ, yana ọtụtụ ụlọ ndị ọzọ ejiri otu mpempe akwụkwọ kpuchie ya maka nchekwa.
N'ime otu kilomita, ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ nchekwa e were n'ọrụ were onwe ha amụbaala okpukpu atọ. Otu ụlọ mmanya nke gara aga belatara ụgwọ nchekwa ya site na iji nkịta nwere oke iwe, kama nke na-agbakwụnye iyi egwu nke ya na ọkwa asụsụ abụọ na-enye ndị na-agafe agafe iwu ka ha ghara ịbanye n'ọnọdụ ọ bụla. Mgbe ọ na -anaghị eyi ndị mmadụ egwu, nkịta na -atụkwasị obi n'ute na -asị "Nnọọ."
Site n'ikike Pattaya Mail
Otu onye nchekwa dị nso bụ Maazị Katee kwuru, “Ọkụ Nashaa emeela ka ụjọ jide onye ọ bụla. Agbanyeghị na enweghị ndị ahịa ụbọchị ndị a, a ka nwere nnukwu ego ejikọtara na ụlọ ochie ndị a. ” Ọ na -eche na ndị nwe ya na ndị na -akwụ ụgwọ na -eche ka a kwụọ ha ụgwọ na nkwadebe maka ịkwatu ụlọ.
Idịghe kpukpru owo ẹnyịme. Ụfọdụ ndị dike igodo mpaghara na -eche na ọ bụ obere oge tupu azụmaahịa dị ka ọ na -esi alaghachi ọrịa na -efe efe na oge ọma na -atụgharị ọzọ. Ha kwesịrị ịgagharị ebe ahụ tupu ha enwee obi ike. Ụlọ Nzukọ Alaeze, maka nke ya, na -akwado nnukwu mgbanwe na -abịa. A gaghị enye ikike ịrụ ọrụ metụtara mmanya na-aba n'anya maka 2022, ebe ụlọ nke dị n'akụkụ oke osimiri na-abanye na mmiri ka akwadoro ịkwatu. Companylọ ọrụ ọkụ eletrik nke mpaghara na-eji ike na-eli eriri ndị dị n'elu na Walking Street, mana echiche n'ozuzu ya bụ ịkwadebe maka oge ezumike na mpaghara azụmahịa kama ịbụ ebe mgbaba maka ndị na-agba egwu osisi chrome.
Eastern Economic Corridor, ụlọ ọrụ bara ụba nke ndị Thai na ụlọ ọrụ nwere nnukwu aha mba ọzọ, bụ ihe na-ekpebi ya. EEC enyelarị ego maka ọtụtụ ọrụ mpaghara-njikọ okporo ụzọ, nkwalite ọdụ ụgbọ mmiri Bali Hai, Jomtien na Pattaya, na ụgbọ okporo ígwè hi-speed na-ejikọ mpaghara na Bangkok-na enweghị obi abụọ ọ ga-aga n'oge adịghị anya na Walking Street. Mgbe ndị na -eyi bọlbụ mechara bata, okporo ụzọ dị iche ga -esi na ntụ pụta.
N'ọnọdụ ọ bụla, ọ gaghị enwe onye ọ bụla ga -echefu ngere nchara gbachiri agbachi na waya siri ike. Naanị ndị ọbịa na klọb ugbu a bụ gwongworo mkpofu ahịhịa.